Ellen Dunnigan Maqaallo ku saabsan Martech Zone |
Maqaallada by Ellen Dunnigan
Lahjadda Ganacsiga aasaasaha iyo agaasimaha guud Ellen Dunnigan waa macallin qaran ahaan la aqoonsan yahay oo la xaqiijiyay oo leh tababar khaas ah oo ku saabsan codka, hadalka, iyo horumarinta Ingiriisiga. Waxay haysataa shahaadada mastarka ee cilmiga cilmiga-luqadda hadalka waxaana loo aqoonsaday inay caafimaad ahaan karti u leedahay Ururka Maqalka-Luqadda Hadalka ee Mareykanka.
U Sheegida Jidkaaga Guusha
Jimce, Maarso 12, 2010 Axad, Agoosto 19, 2012 Ellen Dunnigan
Dhakhaatiirta qalliinka maskaxdu waxay u diyaargaroobaan qalitaan. Ciyaartoyda maskax ahaan waxay isu diyaariyaan ciyaarta weyn. Adiguba, sidoo kale, waxaad ubaahantahay inaad maskax kuhesho fursadaada xigta, wicitaanadaada ugu weyn ama soo bandhigida wali. Horumarinta xirfadaha isgaarsiinta ee weyn ayaa kaa duwanaan doona inta ka hartay xirmada. Ka fikir waxa ku saabsan xirfadaha aad u baahan tahay: Farsamooyinka Dhageysiga ee Masterful - Runtii ma ogtahay waxa macmiilkaagu u baahan yahay iyo sababta? Waa maxay xanuunkiisu? Ma ka maqli kartaa waxa uu leeyahay